6 Ɛnna Hiob buae sɛ: 2 “Sɛ anka wɔrekari m’ahometew+ nyinaa,Na wɔde m’amanehunu nso agu nsenia mu ɛ! 3 Anka emu bɛyɛ duru asen mpoano anhwea mpo.Ɛno nti na me nsɛm ayɛ hatuhatu yi.+ 4 Ade nyinaa so Tumfoɔ agyan aba me so,+Na me honhom renom emu bɔre;+Ahude a efi Onyankopɔn hɔ atwa me ho ahyia.+ 5 Sɛ sare so afurum+ nya sare a, osũ anaa?Na nantwi nya aduan a, osũ? 6 Obi bedi aduan toyoo a ɔnto mu nkyene anaa?Na dɛ bi wɔ dua mu nsu tann mu? 7 Me kra mpɛ sɛ ɛbɛkã emu biara.Ɛte sɛ m’aduan mu abofonode. 8 O sɛ anka menya m’abisadeNa Onyankopɔn ama m’anidaso aba mu ɛ! 9 Sɛ anka Onyankopɔn bɛpɛtɛw me,Na wayi ne nsa atwa me afi hɔ ɛ!+ 10 Ɛno mpo anka menya awerɛkyekye ara,Na madi ahurusi+ wɔ me yawdi kɛse mu,Sɛ wanhu mmɔbɔ mpo a; efisɛ memfaa Ɔkronkronni+ no nsɛm nhintawee.+ 11 M’ahoɔden wɔ he a mede bɛkɔ so atwɛn?+Na ebewie me dɛn sɛ me kra bɛtena ase akyɛ? 12 M’ahoɔden te sɛ abo ahoɔden anaa?Na me honam yɛ kɔbere? 13 Ɛnyɛ ɔboa na mintumi mmoa me ho?Na ɛnyɛ ahoɔden a mede yɛ adwuma na wɔatu afi me mu? 14 Nea ɔde adɔe kame ne yɔnko no,+Ɔde ade nyinaa so Tumfoɔ no suro nso to nkyɛn.+ 15 Me ara me nuanom atwa nkontompo+ te sɛ awɔw bere mu asu a ɛsen,Wɔte sɛ awɔw bere mu asu a etwam kɔ. 16 Nsukyenee ma ani biri,Sukyerɛmma hintaw mu. 17 Sɛ bere so a, nsu no sã,+ na ɛyɛ dinn;Sɛ ɔhyew ba a, ɛyow.+ 18 N’akwan dan fa baabi;Ɛkɔ baabi a hwee nni, na ɛyera. 19 Tema+ akwantufo hwehwɛ emu nsu,Na Saba+ akwantufo kuw nso twɛn no. 20 Wɔn ani wu efisɛ wɔn ani da so;Wɔba bedu hɔ nanso wɔn nsa si fam.+ 21 Afei mo saa mmarima yi, monyɛ hwee;+Moahu ahude, mo koma atu.+ 22 Maka akyerɛ mo sɛ momma me biribi anaa?Na maka akyerɛ mo sɛ momfa mo tumi nyɛ biribi mma me? 23 Maka akyerɛ mo sɛ munnye me mfi ɔtamfo nsam?+Na maka akyerɛ mo sɛ munnye me mfi atirimɔdenfo nsam anaa?+ 24 Monkyerɛkyerɛ me, na me de, mɛyɛ komm;+Mfomso a madi no, momma minhu.+ 25 Teeyɛ nsɛm de​—O ɛnyɛ yaw koraa!+Nanso, mo animka no, ɛyɛ dɛn ho animka?+ 26 So me nsɛm ho animka na mofa ho adwene,Bere a ɔwerɛhoni nsɛm+ te sɛ mframa?+ 27 Sɛ munya nnyanka+ so ntonto mpo a, mobɛbɔ,Na munya mo yɔnko a, mobɛtɔn no!+ 28 Na afei, mo ara monhwɛ me,Na monhwɛ sɛ medi atoro+ wɔ mo anim anaa. 29 Mesrɛ mo, monsan nnwen ho bio; mommma nea ɛnteɛ biara mmma mu;Monsan nnwen ho bio ɛ, na me trenee da so wɔ hɔ.+ 30 So nea ɛnteɛ bi wɔ me tɛkrɛma so,Na me de, minhu nea ama merehu amane anaa?